Onjam-piainana :: Zaza, 4 taona, nokendaina tamin’ny takon-kenatra • AoRaha
Onjam-piainana Zaza, 4 taona, nokendaina tamin’ny takon-kenatra
Novonoina tamin’ny fomba mahatsiravina ity zazavavy kely efa-taona, monina eny Ambodivoly, Itaosy Hopitaly, tamin’ny alakamisy 26 desambra 2019. Ankoatra ny fanapotserana ny masony dia nokendaina tamin’ny takon-kenatrany io ankizy io. Efa nandeha ny famotorana tamin’ity raharaha mampalahelo, izay nialohavan’ny fahaverezan’ilay zaza ity. Misy ireo olona noahiahiana.
Krisimasy tao anatin’ny fitaintainana sy faran’ny taona nangidy no nandalovan-dRakotomena Josepha mivady noho ny famoizan’izy ireo ny menaky ny ainy. Niparitaka tamin’ny tambazotra sosialy sy peta-drindrina mikasina ny fahaverezan’ny zanak’izy ireo, antsoina hoe Manana Estelah, nanomboka ny talata 24 desambra 2019. Notetezina avokoa ny havana aman-tsakaiza, ny andron’ny Krisimasy. Na teo aza ny fanantenana ny mbola hifanatrika amin’ilay zaza velona dia fahoriana tsy roa aman-tany no nianjady tamin’ny fianakaviany, indrindra ho an’ireo nahitany masoandro.
Olona naka taretra no nahita ny razana voalohany, tokony tamin’ny roa ora tolakandro ny ampitson’ny krisimasy. Tamin’ny alalan’ny antso an-tariby no nahazoan’izy ireo ny vaovao ratsy noho ny fahitana fatin-jazavavy teny Faliarivo Ampitatafika, mitovitovy tamin’ilay nalefa tamin’ny peta-drindrina. Ny vatana mangatsiakan’ity zanany vavy kely no novantanin-dRakotomena Josepha, rainy, teny amin’ny Csb II Ampitatafika.
Misy ny olona ahiahian’ny fianakaviana ho nahavita an’izao heloka mamohehatra izao, satria tsy manaraka olona tsy fantany i Estelah, fony fahavelony.
Mivarotra etsy Ampefiloha no asa fiveloman-dRakotomena Josepha mivady. Farany amin’izy dimy mianadahy mpiray tampo i Estelah. Nijanona tao an-trano izy ireo tamin’izao fotoam-pialan-tsasatry ny faran’ny taona ho an’ny mpianatra izao. Aty an-drenivohitra no mianatra ireo ankizy rehefa fotoam-pianarana.
Miorina manamorona ny fefiloha mampitohy ny tanànan’Anjanadrambony sy Ambodivoly Itaosy Hopitaly ny trano fonenan-dry Estelah. Ankizy vitsivitsy mitovitovy taona aminy no niara-nilalao taminy farany.
“Mbola niantso azy hanao ody ambava fo aho, tokony ho tamin’ny efatra ora hariva, vao nahatsikaritra fa tsy miara-milalao amin’ny namany intsony i Estelah”, hoy Nirinasoa Mathilde na i Ravaka, zokiny vavy matoa, mitantara fa mbola niara-nisakafo antoandro izy ireo, tamin’iny alakamisy 26 desambra 2019 iny.
Tanàna milamina na Anjanadrambony na Ambodivoly Avaratra, raha ny filazan’ny mpiara-monina. Toa naningana ny fahaverezan’i Estelah, izay niafara tamin’ny fahafatesany. Manao fangala-piery no kilalao mahazatra an’ireo ankizy noho ny fisian’ny biriky sy bozaka lava ary tanimbary manodidina ny tanàna.
“Tsy manara-dia olona tsy fantany izany i Estelah (…).Efa napetraka amin’ny mpitandro ny filaminana moa ny fikarohana”, hoy Rakotomena Josepha, nanazava ny zavatra mangidy niainany tamin’ny tafatafa tamin’ireo mpanao gazety, nandritra ny fiandrasana ny fivoahan’ny razana tetsy hopitaly Hjra Ampefiloha, ny zoma 27 desambra, taorian’ny fandidiam-paty na –autopsie-”.
Vehivavy iray io nipetrahan’ny ahiahin’ny havana akaiky an’ilay zaza tamin’izao vono olona izao. Niresaka ny antony nahatonga an’io fanononana anarana olona iray io ny dadan’i Estelah.
Tena tsy nisy nanam-po ny zava-nitranga ny rehetra. Nidodododo tanteraka ry zareo tamin’ny fikarohana rehefa nahatsikaritra ny fahaverezan’ilay zaza. Tapitra nanontanian’ireo iray tampo amin’i Estelah avokoa ny olona manodidina sy ny olom-pantatra rehetra.
Nody aloha tsy toy ny isan’andro ry Rakotomena Josepha mivady noho ny andro fety (Krisimasy), ny ampitso. “Nantsoina avokoa ny fianakaviana rehetra, eny hatramin’ny renibeny any Antsirabe. Nilazàna ny manodidina sao any amin’izy ireo i Estelah ka tsy nahalala nody”, hoy Rakotomena Josepha.
Nalefa tamin’ny tambazotra sosialy ny filazana ombay mitady sy peta-drindrina misy ny sarin’i Manana Estelah. “Tamin’ny 2018 no nisy zazalahy, valo taona, very tety fa vetivety dia hita. Tsy fantatra hoe nisy nangalatra ve ilay zaza ? Izy efa mitomany no hitan’ny olona”, hoy Razafindramiaramanana Modeste, Sefo fokontany, taorian’ny fitarihana ny fokonolona maro be tonga nidodododo namangy tao amin’ity fianakaviana nidonam-pahoriana.
Faravavy i Manana Estelah. Tsy araka ny taonany ny hakingany sy ny zava-bitany. Mahatafita hafatra izy rehefa irahina. “Irahin’ny zokiny eto amiko izy raha efa misy ronono na tsia. Miandry lavidavitra ery ny zokiny fa izy no manatona eto. Olom-pantany no nitondra na nangalatra azy fa raha ny fahakingan-tsainy tsy tokony ho very izany izy”, hoy Ramanantenasoa Angele, mpivarotra mofo gasy sy kafe eny Ambodivoly Avaratra.
Vao niditra an-tsekoly tamin’ity taom-pianarana 2019 – 2020 i Manana Estelah. Mianatra amin’ny sekoly tsy miankina iray etsy Ampefiloha izy, noho ireo ray aman-dreniny mivarotra manodidina an’ilay sekoly.
“Eo ho eo ihany izy raha mianatra fa tsy hoe mahay be… Atsipiny eo ambony latabatra ny mofony rehefa fantany fa tsy ho laniny. Fa ny tena tsy laitra aminy dia zarazarainy amin’ny ankizy namany ny volany raha vao homena vola ividianana ody ambava fo izy”, araka ny fahatsiarovan’i Ravaka, zokiny, ny mombamomba an’ity zandriny.
Fisahotana tamin’ny Krisimasy
Nametraka ny taratasy filazana zaza very tamin’ireo toerana be olona mifamezivezy Rakotomena Josepha, nanomboka ny andron’ny Krisimasy, ankoatra ny fandefasana filazana tamin’ny haino aman-jery sy ny tambazotra sosialy.
“Mafy tamiko ny mahita ny olona hamonjy fiangonana hivavaka fa Krisimasy ny andro izaho kosa hitady ny zanako. Jerijerena avokoa ny ankizy mitovitovy amin’ny zanako. Amin’ny efatra maraina aho dia efa nivoaka ny trano. Tamin’ny dimy maraina, ny alakamisy ampitson’ny krisimasy, tsy tadidiko intsony ny ora nodiana tao an-trano”, hoy Rakotomena Josepha, mitantara ny fitaintainany hoe ho hitany velona ihany ve ny zanany sa tsia.
Niolomay namonjy ny Csb II teny Faliarivo Ampitatafika ity ray raha vao nahare ny vaovao ratsy. “Nangaihay aho nahita ny fatin-janako. Tsy nahatomany raha tsy efa elaela. Ny takon-kenatrany ihany no nanakendan’ny mpamono an’ilay zanako. Mangana ny voamasony roa, toy ireny nopotserina ireny. Tsy naolany kosa aloha raha ny fizahana nataon’ny mpitsabo”, hoy hatrany i Josepha.
Nizara roa ny fianakaviana nanome hery azy mivady. Nisy ny teny amin’ny hopitaly niandry ny fivoahan’ny razana ary nisy ny nivantana teny Ambodivoly Avaratra. Nandamindamina ny tao an-trano ny fianakaviana tamin’ny fivantanan’ny razana.
Nalevina teny Ambatofotsy Imerina, ny sabotsy 28 novambra 2019, ny nofo mangatsiakan’i Manana Estelah. Voantso tetsy amin’ny polisy misahana ny heloka be vava na “brigade criminelle” ny iray tampo an’i Estelah hanaovana fanadihadiana ny sabotsy 4 janoary. Tsy mbola voasambotra kosa ilay vehivavy noahiana amin’ny tsy maha eto an-toerana azy. Andrasana ny valin’ny famotorana nataon’ny mpitandro ny filaminana.
Fahasemporana tao amin’ny orinasa :: Vehivavy bevohoka ny telo tamin’ireo mpiasa fitopolo safotra
Hala-jaza :: Mpianatra iray saika niharan’ ny trafikana taova